Fantatrao ve fa ny Vin Number anao fiara na kamiao dia mihoatra noho ny ny bunch ny litera ampiasaina mba hamantatra anao fiara. Ny vin, isa no 17 namerenana vita ny taratasy sy ny maro izay tsy manam-paharoa ny fiara fa ianao dia manana na dia mihevitra mividy. Raha manao ny vin, lookup maro dia afaka mamantatra ny fiara miverina any amin'ny toerana Ary rehefa nazava ny vokarina ary maro fampahalalana manan-danja kokoa.
Ny vin, laharana eo amin'ny fiara dia toy ny rantsan pirinty ny olombelona, tsy misy fiara roa mitovy ny iray. Mety ho gaga ianao hahita fa na dia ny fiara no eto any Etazonia dia mety ho natao tao Meksika, Kanada Na mety aza ny lalana rehetra nalefa avy any Japana, Alemaina, Korea na avy amin'ny firenena maro hafa manerana izao tontolo izao.
Rehefa mihazakazaka ny vin, maro (ihany koa ny mahalala ny tantara ho toy ny fiara tatitra) ny mpamatsy mampiasa no tena isan'ny decode ny vin, ary hilaza aminao izay ny fiara natao, izay ny mpanamboatra dia, na izany na tsy manana boky na fahefana varavarankely sy ny foto-bolo, maotera ny habeny ary ny inona no karazana fampitana. Koa, rehefa mihazakazaka ny vin, maro lookup afaka hahalala bebe kokoa ihany koa ny vaovao toy ny odometer vakiteny eo tompony, na tsia ny fiara mbola nisy nangalatra, raha ny fiara mbola nisy tao amin'ny tondra-drano, ary nijaly simba, ary raha misy misy amin'izao fotoana izao fa mampahatsiaro mifandraika amin'ny fiara manokana. Azonao atao mihitsy aza ny mamantatra raha misy taminao? Ny fiara, raha mbola nisy repossessed, na raha mbola nisy very tanteraka orinasa iray fiantohana.
Hamarino ny Vin Number
Koa ankehitriny dia mety ho manontany ny tenanao “Ahoana no mijery ny vin, isa”? Soa ihany fa ny aterineto, dia somary mora. Ny dingana voalohany dia ny hahazo ny vin, isa ny fiara. Ny fiara sy kamiao manana ny vin, soritra eo amin'ny tapa-vy kely eo amin'ny tsipika eo amin'ny lafiny mpamily fa afaka mahita amin'ny alalan'ny mijery amin'ny alalan'ny ny anoloan'ny ny windshield. Ankoatry ny, mpanamboatra sasany ihany koa ny mametraka ny isan'ny vin, ny ao anatiny ny varavarana, ambanin'ny ronana ary indraindray koa ny tokotanin-tsambo saron'ny na ny vatany. An naoty manan-danja: dia mety hahamarika amin'ny tontonana roa izay ny vin, isa dia tsy mitovy. Tsy voatery midika hoe ny fiara no nangalatra. Mety ho tao amin'ny loza sy ny fiantohana ho an'ny orinasa ihany no namela nampiasa faritra mba hapetraka eo amin'ny fiara fa tsy ny marika vaovao. Na izany aza, raha tonga manerana ny fiara ary samy hafa rehetra vin, manana isa amin'ny tontonana rehetra, ny tsara indrindra dia ny hitoetra Bet lavitra ny fiara manokana.
Avy eo dia mandeha tsotra toy ny solosaina sy ny mandeha an-tserasera. Maro ireo orinasa fanta-daza izay manolotra ny fiara vin, maso. Mitadiava vin, maso fanompoana maro izay youtrust na ny namanao fotsiny fahazoan-dalana ary hiditra ny vin, isan'ny mety ho any amin'ny boaty, izany hoe mora. Ny tena maimaim-poana VIN taratasim-bola dia matetika manome anao Vin decoders vaovao momba ny fiara sy ny fitaovana dia tonga avy amin'ny mpanamboatra.
Raha manao vin, maimaim-poana fikarohana maro izay hasehoko anao ny taona, hanao sy maodely sy ny maotera sy ny lehibe hafa vaovao, dia afaka manohy amin'ny fiara tantara feno tatitra izay mampiseho lehibe olana mekanika, odometer olana, raha ny fiara efa tao amin'ny loza sy ny sisa.
Amin'ny fanamarinana ny vin, isan'ny, dia mety hamonjy anao fotoana be dia be, aretin'andoha sy ny alahelo. Ny olona dia tsy milaza ny marina foana raha ny fivarotana ny nampiasa fiara. Raha manao ny vin, maro maso, dia mety ho ny maha samy hafa rehetra eto amin'izao tontolo izao eo amin'ny manana fiara izay hanompo anao, na manana fiara izay vidin'ny harena kely ianao ary tianao dia afaka manala ny.
Find Cheap Vehicle History Report Eto